Umshini Wokusika Izindiza I-Laser - I-Laser Yegolide
Umshini Wokusika Izindiza Zendiza
Ukusika ukhaphethi wezentengiso nowezimboni kungenye indlela enhle yokwenza i-CO2 laser. Ezimweni eziningi, ukhaphethi wokwenziwa usikwa ngokungashaja okuncane noma kungenzeki, futhi ukushisa okukhiqizwa yi-laser kuthinta ukusika imiphetho ukuvimba ukufraya. Ukufakwa kwamakhareji okhethekile okhethekile kubaqeqeshi bezimoto, izindiza, kanye nezinye izinhlelo zokusebenza ezincane zesikwele kusizakala ngokunemba nokulula kokuba nomshini wokhaphethi ohlelweni olukhulu lokusika i-laser.
• format Esibanzi flatbed CO2 umshini wokusika we-lasernge 11 amamitha ithebula ende zokusebenza.
• Ifanele kakhulu imigqa eqhubekayo yokuqopha kanye nokusika kwezinto zokwakha umata.
• Ithebula lokuhambisa le-Vacuum ngohlelolokuphakelwa kwezimoto(ngokuzithandela). zokusika eziqhubekayo zomata.
• Lolu hlelo lokusika le-laser lungenza isidleke esengeziwe esengeziwe nokusika okugcwele kwifomethi eyodwa ende kunefomethi yokusika yomshini.
• Isoftware ye-Smart nesting ezisheshayo nezisindisa ezibonakalayo kwihluzo ezizogawulwa.
• Iphaneli yokubonisa ye-5 '' LCD. Ukusekela imodi yokuhambisa idatha eminingi futhi ingagijimisa ngezindlela ezingaxhunyiwe ku-inthanethi naku-inthanethi.
• Servo top draust suction lwenza ukuthi ikhanda le-laser livumelaniswe nohlelo lokufuthelwa kokukhipha amandla, okuthi umphumela wokuncela muhle futhi usindisa amandla.
• Ifakwe nge-red light positioning device, evimbela ukuphambuka kwesimo sendlela okusetshenziswayo kokuphakelayo nokuqinisekisa ikhwalithi ephezulu yokusika.
• Abasebenzisi bangaphinde bakhethe amafomethi wokusebenza we-1600mm × 3000mm (CJG-160300LD II), 3000mm x 4000mm (CJG-300400LD II), 2500mm × 3000mm (CJG-250300LD), 1600mm × 8000mm (CJG-160800LD), 3400mm × 11000mm ( CJG-3401100LD) izindawo ezisebenzayo nezinye izindlela ezenziwe ngezifiso zezindawo zokusebenza.
Aircraft umshini wokusika okhaphethi we-laser wokukhiqiza
CJG-2101100LD Umshini wokusika we-LaserTechnical sepharamitha
CO2 RF insimbi ye-laser yensimbi
I-2100mm × 11000mm (82.7 ku-× 433 in)
Ithebula lokuhambisa le-Vacuum
Uhlelo lokulawula izimoto lweServo, iphaneli yokubonisa ye-5 '' LCD
Amazinga okushisa wamanzi njalo
Ifomethi ye-Graphics iyasekelwa
I-AI, BMP, PLT, DXF, DST, njll.
Fan fan, blower air, GOLDENLASER isoftware engaxhunyiwe ku-inthanethi
Uhlelo lokondla okuzenzakalelayo, uhlelo lokukhanya okubomvu
*** Qaphela: Njengoba imikhiqizo ivuselelwa njalo, sicela uxhumane nathi ukuthola imininingwane yakamuva. ***
IGOLDEN LASER - Umshini wokusika we-Laser Flatbed Laser Flatbed
Umshini wokusika we-Flatbed CO2 Laser
1600mm × 3000mm (63 ”× 118.1”)
2100mm × 3000mm (82.7 ”× 118.1”)
I-2500mm × 3000mm (98.4 "× 118.1")
2100mm × 6000mm (82.7 ”× 236.2”)
I-2100mm × 8000mm (82.7 "× 315")
I-2100mm × 11000mm (82.7 "× 433")
I-3000mm × 5000mm (118.1 "× 196.9")
3200mm × 5000mm (126 ”× 196.9”)
I-3200mm × 8000mm (126 "× 315")
I-3200mm × 10000mm (126 "× 393.7")
INDAWO YOKUXHESHA NGAZOQINISEKWA
Izicelo Zekhaphethi Laser
ukhaphethi owenziwe, ukhaphethi we-nylon, ukhaphethi woboya, ukhaphethi owenziwe ngefolishi, ukhaphethi owelukiweyo, ukhaphethi omfushane, uvolo wokuhlobisa kanye ne-nylon rug, usike ukhaphethi owenziwe ngethanga, ukhaphethi ohlanganisiwe, udoti obanzi, ukhaphethi owenziwe ngogesi, ukhaphethi odongeni, mat, njll.
i-yoga mat, ikhaphethi yokudlela, ikalishi lokuhlala, ukhaphethi wephaseji, uphaphethi wehhovisi, ukhaphethi we-logo, umaki we-logo, isibhedlela se-woolen rug, i-carpet yehhotela, ukhaphethi wehholo ledili, ukhaphethi wokuthengisa, ukhaphethi wasendlini, ukhaphethi ongaphandle, i-floor floor , Mat yemoto, mat indiza, ukhaphethi wendiza, njll.
Amasampula Wekhaphethi Laser
<< Funda kabanzi ngamasampula we-Carpet Laser Engraving
Kungani Khetha i-Laser ukusika Ikhaphethi?
Ukusika ukhaphethi wezentengiso nowezimboni kungenye indlela enhle yokwenza i-CO2 laser. Ezimweni eziningi, ukhaphethi wokwenziwa usikwa ngokungashaja okuncane noma kungenzeki, futhi ukushisa okukhiqizwa yi-laser kuthinta ukusika imiphetho ukuvimba ukufraya. Ukufakwa kwamakhareji okhethekile okhethekile kubaqeqeshi bezimoto, izindiza, kanye nezinye izinhlelo zokusebenza ezincane zesikwele kusizakala ngokunemba nokulula kokuba nomshini wokhaphethi ohlelweni olukhulu lokusika i-laser. Kusetshenziswa ifayela le-CAD leplani yaphansi, umsiki we-laser angalandela ukukhishwa kwezindonga, izinto zokwenza umsebenzi, kanye nekhabinetry - nokwenza ngisho nokusika kokuthunyelwe kwetafula okusekelwa kanye nemizila yokukhwela yezihlalo njengoba kudingeka.
Isithombe sokuqala sibonisa ingxenye yokhaphethi ene-postout cutout eyenzelwe phakathi nendawo. Imicu ekhaphethi isetshenziswa inqubo yokusika i-laser, evimbela ukuthimula - inkinga ejwayelekile lapho ukhaphethi usikwa ngokomshini.
Isithombe sesibili sibonisa umphetho osikiwe kahle wesigaba se-cutout. Ukuhlanganiswa kwemicu kule khaphethi akubonisi zimpawu zokuncibilika noma zokushaja.
I umshini wokusika okhaphethi we-laser enquma ifomethi nosayizi ezahlukene zonke izinto ukhaphethi. Ukusebenza kwayo ngempumelelo nangendlela ephezulu kuzothuthukisa ubungako bakho bokukhiqiza, konga isikhathi futhi konga izindleko.
Umshini wokusika weGalvo Laser Perforating Cutting weSandpaper Abrasive Disc
Izinhlelo ezinkulu zokuskena ze-galvanometer. Imithombo eminingi ye-laser yokwandisa umkhiqizo. Ukuzondla okuzenzakalelayo nokubuyela emuva - umhambisi…